5 Best Attractions Fa Kids In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Attractions Fa Kids In Eoropa
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 01/01/2021)
Niara-dia ireo ankizy dia afaka na ho nofy ratsy, na ny tsara indrindra ny fotoana eo amin'ny fiainanao. Noho ny zanakay madinika 'mitaky fomba aman-toetra sy ny faniriany mba po azy ireo, misy matetika tsy misy eo anelanelany. Na izany aza, misy fomba ho anao mba ho mora kokoa amin'ny ankizy mandeha ho anao. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia mba hahazoana antoka ny ankizy foana ny zavatra atao na hahita. Mba hanampiana anao hitandrina azy ireo variana, izahay dia nanangona lisitry ny 5 tsara indrindra ho an'ny ankizy manintona any Eoropa. Afaka hahatratra izany toerana mora foana lamasinina. Ndeha isika hijery:
Attractions for Kids in Italia
Atolotry i Italia zava-mahaliana mahafinaritra ho an'ny ankizy raha sendra ny manan-tantara zavatra hita dia tsy manaitaitra azy. In Viserba fialam-boly zaridaina, 'izy ireo mahita ny zavatra hita ao Italia in kely! Ny valan-javaboary ihany koa dia manasongadina ny faharavoravoam--mandehana-fihodinana, tokotanin-tsekoly, isan-karazany mitaingina, ary ny sarimihetsika. -tsy izany, Raha tsapanao fa mitady amin'ny Roma, afaka mandeha any Hydromania rano park. Tsy lavitra an'i Roma, dia Mampanantena maro tsary sy ny rano mahafinaritra, izay mahatonga azy io tanteraka ho an'ny ankizy.
Attractions for Kids in Angletera
Ny iray amin'ireo tena manintona ny ankizy any Angletera no Warner Bros. Studios Ny fanaovana ny Harry Potter fitsidihana in London. Na izany aza, ho an'ny tanora mpikaroka liana amin'ny zava-mahagaga ny toetra, London ny Natural History Museum dia safidy lehibe. Maro ireo ankizy-namana fampirantiana izay afaka mianatra momba ny dinosaurs sy ny rafi-masoandro. Tena tsara izany traikefa izay mahatonga London mendrika ny mitsidika ny fianakaviana.
Attractions for Kids any Holandy
Amsterdam matetika dia tsy soso-kevitra amin'ny maha-fianakaviana-namana toerana halehany, nefa tsy midika izany tsy afaka ny ho toy izany. ho an'ny ankizy, angamba ny toerana tena mampientam-po no Natura Artis Magistra na ny mpanakanto. A Zoo lehibe feno aquarium, playgrounds, Zoological Museum, ary ny planetarium. Tsy manasongadina mihoatra noho ny 900 karazam-biby!
-tsy izany, azonao atao ny loha tsy mahazo manao Efteling in Kaatsheuvel. Izany no zaridaina lohahevitra lehibe indrindra ao amin'ny firenena, amin'ny nofinofy sy ny foto-kevitra mifantoka amin'ny anganongano sy ny angano. Maro ny fialam-boly ho an'ny mitaingina sy ny ankizy izay tia angano.
Raha ny fialam-boly ho an'ny ankizy, Belzika manolotra ny foto-kevitra zaridaina, Plopsaland. Tena maro loko, -roller feno coasters sy playgrounds, ary manana lohahevitra isan-karazany ho an'ny ankizy rehetra mankafy. Izany ihany koa dia manana toeram-pambolena amin'ny biby fa ny ankizy dia afaka mitsidika, ary koa ny teatra sy ny mitaingina sambo.
Antwerp an'i De Panne Lamasinina
Ny iray amin'ireo malaza indrindra ho an'ny ankizy no mahasarika isalasalana fa Disneyland. Tsy hahazo misy tsara kokoa noho ny iray amin'ny Paris. Io no foto-kevitra malaza indrindra zaridaina nanerana an'i Eoropa noho ny antony. Misy faritra dimy nanana lohahevitra, ary koa ny maro sy ny zavatra manintona mitaingina. Ny sasany amin'izy ireo dia ahitana Parc Asterix, Pirates ny Karaiba, Buzz Lightyear Laser Fipoahana Ary kely ny Tontolo. Ny fitsidihana an'i Paris sy Frantsa amin'ny ankizy dia tsy feno raha tsy Disneyland.
Vonona ny manana tsy hay hadinoina vakansy miaraka amin'ny fianakaviana manontolo? Tsidiho ny sasany amin'ireo 5 tsara indrindra ho an'ny ankizy manintona any Eoropa avy amin'ny lisitra, ary ianao manana fipoahana. Ataovy azo antoka ny hanaovana drafitra ny fialan-tsasatra sy ny boky ny saran-dalana ara-potoana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-attractions-kids-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / de mba / andehilahy na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#attractions #traveleurope europetrains europetravel eurotrip fiarandalamby Train Travel fiaran-dalamby nankany travelbelgium travelengland travelfrance travelitaly travelnetherlands traveltips